ကြေးမုံ၊ အနုပညာနှင့် လက်မှုပညာ စက်ရုံ ပေးသွင်းသူ-SHUNDA - သတ္တုအလွှာအုပ်ထားသော သတ္တုဖြင့် ခေါက်နိုင်သော အရည်အသွေးမြင့် ဝါယာကြိုးများ ခေါက်နိုင်သော အသီးအနှံများ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော မီးဖိုချောင် သိုလှောင်ခြင်း တောင်းများ OEM နှင့် စက်ရုံ | SHUNDA
သစ်သား PVC မှကြိုဆိုပါတယ် Seahorse Animal Beach Door Sign...
တရုတ်နိုင်ငံ စက်ရုံတွင် တြိဂံပုံသဏ္ဍာန် သစ်သားကြိုး အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ ...
စျေးကောင်း ဇင့်အလွိုင်း သတ္တုလုပ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သတ္တု...
သတ္တုဖြင့် ခေါက်နိုင်သော အရည်အသွေးမြင့် ဝါယာကြိုး...
စင်နှင့်အတူ မီးဖိုချောင်သုံး အနက်ရောင်စက္ကူ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ လက်ကိုင်အိတ်
Hinged Lid နဲ့ Front Cl...
5pcs လအဆင့် စင်သစ်သား လစက်ဝန်း နံရံကပ်စင်...
သစ်သား acrylic လျှောအဖုံးထုပ်ပိုးလက်ဆောင်သေတ္တာ
နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော အစက်သစ်သားစင် သစ်သားရေပေါ်စင်...
သစ်သားသတ္တုမှန်ဖြင့် နံရံကပ် Moon Shelf...
တရုတ် OEM စတုဂံသစ်သားသေတ္တာ ထုတ်လုပ်သူများ ̵...
China OEM Floating Shelf ပေးသွင်းသူများ - သစ်သား ...
တရုတ် OEM နှစ်ထပ်လမင်းစင် ပေးသွင်းသူများ - နံရံ...
တရုတ် OEM သစ်သားမိတ်ကပ်သေတ္တာရောင်းချသူများ - နံရံ...
China OEM Wall Hanging Shelf ပေးသွင်းသူများ - Woo...
တရုတ် OEM သစ်သားလက်ဆောင်သေတ္တာစက်ရုံ - ဖက်ရှင် ...
တရုတ် OEM သစ်သားမိတ်ကပ်သေတ္တာစက်ရုံ - သစ်သား ...
တရုတ် OEM မိုးပျံနံရံကပ်စင် စက်ရုံများ - Res...
ခေါက်နိုင်သော သတ္တုဖြင့် ခေါက်နိုင်သော အရည်အသွေးမြင့် ဝါယာကြိုးများ
FOB ဈေးနှုန်း- USD $ 1 –3/ အပိုင်း |နောက်ဆုံးပေါ်စျေးနှုန်းကိုရယူပါ။
အနည်းဆုံး မှာယူမှု အရေအတွက်- 1 Pieces / Pieces
Supply နိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 1000 Pieces / Pieces
ဆိပ်ကမ်း- နင်ဘို၊ ရှန်ကျန်း၊ ကွမ်တုံ၊ ချင်ဒေါင်း၊ စသည်တို့
ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ- T/TL/CD/PD/A MoneyGram ခရက်ဒစ်ကတ် PayPal ငွေသား Escrow အခြား
ပို့ဆောင်မှုအသေးစိတ်-7ရက်
မျက်နှာပြင် ပြီးပါပြီ။ အပေါ်ယံပိုင်းဖြင့် Qire
Wire Dia ထုတ်ကုန်အလိုက်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
အရောင် အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ ငွေရောင် စသဖြင့်
OEM & ODM လက်ခံပါတယ်။
MOQ 1 အပိုင်းအစ
ပို့ဆောင်ချိန် အပ်ငွေလက်ခံရရှိပြီး 10 ရက်ခန့်ကြာပါသည်။
ငွေပေးချေမှု သက်တမ်း TT၊ paypal၊veem၊Escrow၊ wester union၊ ငွေသားစသည်ဖြင့်
တင်ပို့ခြင်း။ လေကြောင်း၊ ပင်လယ်၊ အမြန်ဖြင့် (DHL၊ TNT၊ UPS၊ EMS၊ Fed Ex)
အလုပ်ရုံ & ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
SHUNDA လက်မှုပညာသည် ကြေးမုံအမျိုးအစားအားလုံးကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ခြင်း (ဖန်ကြေးမုံ၊ လကြေးမုံ၊ ကြေးမုံဖြင့် စင်၊ သတ္တုဘောင်ကြေးမုံစသည်ဖြင့်)၊ သစ်သားလက်မှုပညာများ (သစ်သားစင်၊ သစ်သားနံရံစင်၊ သစ်သားရေပေါ်စင်၊ သစ်သားထုပ်ပိုးသေတ္တာ၊ သစ်သားထုပ်ပိုးမှု) ဘောက်စ် စသည်ဖြင့်) သတ္တုလက်မှုပညာများ (သတ္တုစင်၊ သတ္တုပြားစင်၊ သတ္တုသစ်သီးအိတ်၊ သတ္တုသစ်သီးအိတ်၊ သတ္တုတစ်ရှူးစက္ကူကိုင်ဆောင်သူ၊ စသည်) ဖန်လက်မှုပညာ (ဖန်ပုလင်း၊ ဖန်ပုလင်း၊ စသည်)၊ စေးလက်မှုပညာနှင့် ကြွေထည် အဆင်တန်ဆာများ သို့မဟုတ် လက်ဆောင်များ ခရစ္စမတ်၊ ဟယ်လိုဝင်း၊ အီစတာနှင့် ချစ်သူများနေ့ စသဖြင့်ပေါ့။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုများဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှန်၊ စင်၊ မီးချောင်းများနှင့် ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များအပါအဝင် အိမ်အလှဆင်စက်မှုဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တစ်ခုအဖြစ်သို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး၊ ကြေးမုံ၊ စင်၊ မီးချောင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အပါအဝင် စနစ်တကျ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်တစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ထုတ်ကုန်တိုင်းကို ပြီးပြည့်စုံစွာသေချာစေရန် ပစ္စည်း၊ နမူနာများ၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ထုပ်ပိုးခြင်းမှ ပို့ဆောင်ခြင်းအထိ အဆင့်တိုင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးပြည့်ဝသော စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ နိယာမကို ဦးစွာပထမ၊ အရည်အသွေးပထမ၊ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို အခိုင်အမာတောင်းဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့်ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် ခိုင်မာသော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်လမ်းကြောင်းများနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်ကုန်လိုင်းများရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် အကြီးတန်းဒီဇိုင်နာများအဖွဲ့၊ စူပါထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်၊ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ၊ ဖောက်သည်များအား တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုဖြေရှင်းချက်ပေးရန်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရောင်းအဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။
လက်ရှိတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အရည်အသွေးမြင့် လုပ်ငန်းထောင်ပေါင်းများစွာနှင့် နက်ရှိုင်းစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ 80% ကိုတင်ပို့သည်။ SHUNDA လူတစ်ဦးစီသည် သင့်အား ကျွမ်းကျင်မှု၊ ရိုးသားမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုတို့ဖြင့် အပြုသဘောဆောင်သော အဆင့်အတန်းတစ်ခုကို ကတိပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနာဂတ်တွင် သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပါတနာဖြစ်လာမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။
တင်ပို့ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့နှင့် R&D အဖွဲ့တို့လည်း သင့်ဝန်ဆောင်မှုကို အမြဲရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် အာမခံထားသော ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်၊ အတိုဆုံးအချိန်နှင့် ဘေးကင်းဆုံးသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ မင်းရဲ့ကျေနပ်မှုဟာ ငါတို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော စွမ်းအားနဲ့ ရိတ်သိမ်းခြင်းပါပဲ။
1. OEM & ODM၊ မည်သည့်မှန်များကိုမဆို အရောင်၊ အရွယ်အစားဖြင့် စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဈေးနှုန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင့်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကို 1 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပါမည်။
3. အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး၊ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အချိန်မီပေးပို့ခြင်း။
Shunda Home Decoration စက်ရုံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖောက်သည်များအတွက် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်း၊ အရောင်းနှင့် အရောင်းအပြီး ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို ပေးဆောင်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြေးမုံ ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် မှန်ပတ်ပတ်လည်၊ လခြမ်းမှန်၊ လမှန်အစုံ စသည်တို့ကဲ့သို့သော မှန်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ပါသည်။အိမ်၊ ရုံးခန်းများ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ စူပါမားကတ်များ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ဟိုတယ်ပရောဂျက်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသော၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM နှင့် ODM လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့်၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းထုတ်ကုန်များနှင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မညှာမတာလိုက်စားမှုဖြစ်သည်။ ကြေးမုံထုတ်လုပ်ရေးနှင့် တင်ပို့ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများ လက်လှမ်းမီပါက သင့်အား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အတွေ့အကြုံကောင်းများကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ဆန်းသစ်သောထိရောက်မှု၊ ကွဲပြားသောပုံစံများနှင့် တွေးခေါ်မြော်မြင်သောဝန်ဆောင်မှုဖြင့်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုကိုရရှိထားပြီး၊ သင်၏သတင်းစကားအား စောင့်မျှော်ပြီး တရုတ်မှကြိုဆိုပါသည်။
1. မေး- မင်းက စက်ရုံ ဒါမှမဟုတ် ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။
စက်ရုံတစ်ရုံ။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု၊ အရည်အသွေးနှင့် အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများဖြင့် အိမ်အလှဆင်ခြင်းအနုပညာနှင့် လက်မှုပညာစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အကောင်းဆုံးစက်ရုံဖြစ်လာရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
2. ကျွန်ုပ်သည် LED မီးအတွက်နမူနာအမိန့်တစ်ခုရနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ အရည်အသွေးကို စမ်းသပ်ပြီး စစ်ဆေးဖို့ နမူနာအမိန့်ကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ရောနှောထားသော နမူနာများကို လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
3. အရည်အသွေးကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့အာမခံနိုင်မည်နည်း။
အစုလိုက်အပြုံလိုက် မထုတ်လုပ်မီ အမြဲတမ်း ထုတ်လုပ်မှုနမူနာ၊
4. မေး- သင့်ငွေပေးချေမှု စည်းမျဉ်းများကား အဘယ်နည်း။
A: TT၊ paypal၊veem၊wester union၊Escrow၊ cash စသည်တို့
5.Q: မင်းရဲ့ ပေးပို့မှု စည်းကမ်းတွေကဘာလဲ။
A- EXW၊ FOB၊ CFR၊ CIF၊ DDP နှင့် အခြားသတ်မှတ်ချက်အချို့ကို အသုံးပြုသူ လိုအပ်ပါသည်။
6. ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသို့ တင်သွင်းရန် ပို့ဆောင်ခကို လျှော့ချရန် နည်းလမ်းရှိပါသလား။
A- သေးငယ်သော မှာယူမှုအတွက်၊ အမြန်သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါမည်။ အများအပြားမှာယူမှုအတွက်၊ ပင်လယ်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် ပို့ဆောင်ချိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အရေးပေါ်အမိန့်စာများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏သင်္ဘောပါတနာပုံစံဖြင့် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ယခင်- Black Paper Towel Holder Basket with shelf မီးဖိုချောင် စားပွဲခုံ ဗီရိုအောက်ရှိ ဖိုခုံ သတ္တုစင် အောက်ရှိ အိမ်သာလိပ် တစ်ရှူး စက္ကူကိုင်ဆောင်သူ
နောက်တစ်ခု: စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါ ကိုင်ဆောင်ထားသော ဘေ့ စင်ပါ မီးဖိုချောင် စားပွဲခုံ ကက်ဘိနက် ဖိုခုံအောက်ရှိ သတ္တုစင်အောက်ရှိ အိမ်သာလိပ် တစ်ရှူး စက္ကူကိုင်ဆောင်သူ
*မည်သည့်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဆို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော မှန်ကိုကြိုဆိုပါတယ်*
ဘေးကင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
မိသားစုများနှင့် သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော လက်ဆောင် ဖြစ်သလို အနုပညာအလှဆင်မှုလည်း ကောင်းပါတယ်။
နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော အစက်သစ်သားစင် သစ်သားရေပေါ် Sh...
နှစ်ထပ်ရွှေငါးအစေး သို့မဟုတ် ကြေးဝါကြေးနီကို နမ်းနေသည်...
30ml၊60ml၊120ml Glass Perfume Bottle Air Diffus...
တရုတ်လက်ကား စိတ်ကြိုက် Round Shape ဗန်း ကော်ဖီ...
သစ်သားတွဲလောင်းစင်3လွှာ၊ Boho Rustic Wood Swi...
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက သင့်အီးမေးလ်/ whatsapp ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချန်ထားခဲ့ကာ ကျွန်ုပ်တို့ထံ 12 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
သစ်သား PVC တိရစ္ဆာန်ကမ်းခြေတံခါးဆိုင်းဘုတ်မှကြိုဆိုပါတယ် ...
လက်ကား စိတ်ကြိုက် ဘက်စုံသုံး တွဲလောင်း ...
သစ်သားဆိုင်းဘုတ် ခရစ်စမတ်ဆွဲသီး ဖန်တီးမှုတွဲ...
တရုတ်ပေးသွင်းသူ 4pcs ပတ်ပတ်လည်လအဆင့်သတ်မှတ် ...
လိပ်စာ- NO.158WANGCHAO RD SHANGCHENG ခရိုင်၊ HANGZHOU တရုတ်။